Fiiri Menu-keena - Cunnooyinka Taayirrada
Waxaan bixinnaa cuntooyin la siinayo maalin kasta oo kulul, iyo sidoo kale keenitaanno cunto barafaysan oo toddobaadle ah oo habboon. Cuntooyinka halkaan ku sawiran waxay ka tarjumayaan menu -ka ay bixiyaan inta badan Barnaamijyada Cunnada ee Magaalooyinka Mataanaha - menus -ku way ku kala duwanaan karaan aagga.
Cuntooyinka waxaa la qorsheeyey iyadoo maskaxda lagu hayo cuntooyinka caafimaadka u leh wadnaha iyo macaanka. Waxaan dejin karnaa inta badan cuntooyinka caafimaadka, oo ay ku jiraan kelyaha, jilicsanaanta farsamada iyo nadiifinta. Cuntooyinka Kosher iyo Halal ayaa sidoo kale laga heli karaa inta badan aagga adeeggayaga. Naga soo wac 612-623-3363 wixii faahfaahin ah.